Twin Seoul sigaba Isigaba sesine "kanti zikwasukela (ixesha cwaka, ixesha ngxi)" kunye
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Twin Seoul sigaba Isigaba sesine "kanti zikwasukela (ixesha cwaka, ixesha ngxi)" kunye
Ngokusebenzisa indlela real
newele Seoul ukufumana [3500 yen yovavanyo lwentsebenzo Free] ukuya oosiyazi liqonga ezisixhenxe, ngokwenene inyathelo ukuya ku tho ukuya kwenye ngomphefumlo, Isigaba sesine ixesha ngokwenene buhlungu ukuba babe. Kweli nqanaba, ngokuba ezimbini okuhlamba uyeza.
ngamandla yokungqubana kwinqanaba yesithathu, emva kokwehlelwa intlungu enzulu omnye komnye, omnye isiqabu zingamisi intlungu, kunye nokudideka elinye ngesiquphe kude ukuya kwelinye icala, ngoko ke ukusukela ummangali I.
lo mgama, akukho mfuneko ukuyishwabanisa nje Musani ukukulahla ngoko ke ego ezibangele ukuba ingxabano elinesibini ukuya kwisigaba sesithathu. Ngamanye amaxesha, ukuba kuya kuqhubeka ukwahlulwa karhulumente kwithuba ngokungenamkhethe elide ixesha.
Ke intsingiselo yokwenene ngeli thuba ukuba ukugcina umkhondo ukubambelela elinye iqela abakhwelelayo kude kube kanye, mna, umyalelo onjalo ukuba ajolise ngenyhek kokomoya ukuphucula ezabo. Enoba Kizukeru oko, kuya kubakho uvavanyo enkulu kweqonga yesine.
ego nesigama ukuba nokusukelana ngakumbi kude ukuya Twin Seoul ulwalamano lwabo
? kanti zikwasukela
ngubani seyininzi ebomini kunye nothando namava Chase odlulileyo, oko kudala eninzi yokukhanyela. Emva koko, imvakalelo kwenziwa nasengqondweni ukuba babe kwimeko ezingazinzanga ngamandla, kodwa akunjalo ukuba ukwala ngamandla kumdlali welinye icala.
Ngenxa yoko, enye betha ixhala nentandabuzo omnye komnye, nam ndiziva buhlungu eyomeleleyo nembangi yakhe. Ukuba akusekho ninyamezele lo, omnye ukuzama ukubaleka bubudlelwane. Kwaye, omnye neyomnye obebethelelwe babalekayo phambi ngequbuliso amehlo, sizenzela ngamandla uzama aphinde thile welinye icala. Kule buhlobo, ubani ukubaleka imbaleki sizenzela iya kubizwa ngokuba zikwasukela.
? ukubandezeleka ubalekele
imbaleki ukuze kukhokelela ngenyhek zikwasukela ngokomoya Bekuya kuba kubhideka ngaphandle engayazi loo nto. Kwaye, imbaleki exineneyo ucinga ukuba makazincame ngokwakhe, kulula okanye ityala ezabo Dari nenzondo nxamnye kumdlali welinye icala. Urhulumente ibuhlungu kakhulu, isenokuba abo nodandatheko.
Noko ke, ukuba ngokwenene ababini abantu umphefumlo ngamawele, imbaleki akanayo kunokuba wabaleka wemka ngenxa yaba zikwasukela intiyo into. Nangona Ndiyamthanda kakhulu, va ukoyika ukujonga ngokwam ukuba akazi na zikwasukela, ngaba ndiye abaleke. Ekubeni ubuhlobo yinto inqanaba umphefumlo, kungekhona into eno- kuba wayecinga ukuba ukuzama ukuphucula.
Ngoko ke, zikwasukela, kufuneka kuyilahla kwakuba phithi ye imbaleki. Kwaye, ukuba banda khazimlisani yawo, siyakwazi ukwamkela Awakening ngokomoya.
kwinqanaba lesine xa uvuka omnye komnye ngokusebenzisa ixesha, kwakhona Nijonge ngokwam ngokushiya na omnye komnye, kunokuthiwa ukuba ngenene ixesha ukwandisa yawo ukuze ukwazi ukuthanda wena. Ukuba Norikoere le nquleqhu, kusenokwenzeka ukuba ufumane Awakening ngokomoya omnye komnye, yaye safika ukuya apho mna ekugqibeleni kuba nako bangadlulela kwinqanaba elilandelayo le umphefumlo amawele.
Ukuba, samkele ngenyhek ngokomoya.